Karazan-tsoavaly tinker | Soavaly Noti
Ilay soavaly fantatra amin'ny hoe Tinker, Ity dia a soavaly mahery sy mahomby izany koa dia manana tantara ao ambadik'izy ireo izay tsy mitovy amin'ny volony.
Ny tena mampiavaka azy ireo, ankoatry ny hatsaran-tarehiny, dia ny vatany matanjaka sy ny ozatra mizana tsara. Ho fanampin'izany, ny karazany Tinker dia manana hatsarana manokana noho ny haben'ny volom-borona amin'ny faritra toa ny mane, rambony ary koa amin'ny rantsam-batany.
Ny fahasamihafana amin'ny lokon'ny sosony dia tena malalaka, na dia aseho matetika aza izy ireo aloky ny loko ctoy ny bay, peep, ary kapa mainty, ankoatry ny maro hafa.
ny Avy any Irlandy ny soavaly tinker. Eo izy ireo ankehitriny ary efa mpiara-dia tsy mety reraka amin'ireo vondrom-piarahamonina gipsy amin'ity firenena ity efa ela. Inona koa, ny anarany amin'ny teny anglisy dia midika hoe gypan. Ny tazomin'i Tinker dia manondro fa mety ho taranaky soavaly Shire, Clydesdale ary Welsh Cob izy ireo.
Noho izany, noho ny toetran'izy ireo momba ny fahamendrehana sy ny tanjany, dia nampiasaina nandritra ny tantara izy ireo soavaly hisintona sarety na koa ho an'ny mitaingina. Izy ireo koa dia nametraka ny tenany ho iray amin'ireo soavaly soavaly tsara indrindra handehanana lavitra mitondra enta-mavesatra.
Ny haavon'ny hazo fijalian'ny soavaly Mandeha 140 santimetatra i Tinker hatramin'ny 160 tany ho any. Ity karazana ity dia manana toetra tena mandehandeha ary karazany marani-tsaina koa izy ireo.
Raha manao tantara vitsivitsy isika taorian'ny fisehoany voalohany nanomboka tamin'ny taona 600 talohan'i JK, ireo soavaly Tinker dia nanana anarana maro samy hafa nandritra ny tantarany. Ny sasany amin'ireto anarana ireto dia Gypsy Vanner, Gypsy Cob, Cob Colored ary Cob Irish.
Amin'ny ankapobeny, ireo anaram-bosotra ireo dia miresaka karazana soavaly tsy manam-paharoa, nobeazin'ireo mpandehandeha noho izy matanjaka nitaterana ny tranony sy ny fananany, nefa tamin'izany fotoana izany ampy tsara amin'ny olombelona. Voafantina amin'ny soavaly toa an'i Clydesdales sy Friesiana, ny valiny dia ny tanjaky ny soavaly mitaingina soavaly mitaingina soavaly.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » Karazan-tsoavaly » Karazan-tsoavaly tinker
Ponies sy ny mampiavaka azy ireo